सरकार, मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन दे! « AayoMail
बुधबार दिउँसो भैरहवाको मेडिकल कलेजबाट एकजना चिकित्सकले फोनमा आफ्नो निरिह अवस्था सुनाउनुभयो– ‘आइसियुमा गम्भीर बिरामीहरू अक्सिजनकै भरमा बाँचेका छन्। कोभिड वार्डमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। अहिले ४ बजेतिर अक्सिजन सकिँदैछ। अस्पताल प्रशासनले बिरामीका आफन्तलाई आफैंले केही बन्दोबस्त गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ। कस्तो पीडादायी!’
युनिभर्सल मेडिकल कलेजका चिकित्सक पवन बरालले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘अब अक्सिजन छैन। अस्पताल प्रशासनका कर्मचारी रातभरि सिडिओ कार्यालय र अक्सिजन फ्याक्ट्रीमा बसेर बिहान फर्किए। चितवनबाट आउने अक्सिजन अपहरहा भएछ। रुँदै हामीले सकेनौं डाक्टर साब अब के गर्ने भन्छन्। २०–२५ जना (बिरामी) भेन्टिलेटरमा छन्, ४० जना आइसियुमा छन्। दुई–तीन दिनदेखि अन्त लैजानुस् हालत यस्तो छ भनिराखेको छु। कहाँ लैजाने? कसरी लैजाने? हामी त जाने कहीँ छैन, जे हुन्छ तपाईंकै भर भन्छन्। बिनाअक्सिजन त म केवल एउटा ढुङ्गाजस्तो मात्रै हो। अब यी बिरामी मरेको टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही उपाय देख्दिन। हे भगवान कस्तो दिनमा यो विषय पढिएछ। यत्रो पापको भारी कसरी बोक्ने हो!’
महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा लडिरहेका चिकित्सकहरूले लेखेका यस्ता अभिव्यक्ति पढेपछि हामीसँग लेख्ने कुनै शब्द बाँकी रहन्न। भैरहवाको अवस्थाबारे चिकित्सक बरालका यी शब्दभन्दा कम पीडाजनक छैन, सहिद गंगालाल हृदयरोग अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोलेको कुरा।